Daraasad Soo Bandhigtay Xanuunada Ay Filfishu Daawayso - Daryeel Magazine
Cilmi-baarayaal ka socda hay’adda lagu magacaabo world medical institution ayaa shaaca ka qaaday in Filfisha ay daawo u tahay cuduro ay ka mid yihiin Gaastiriiga kaasoo uu ku dhaca hab-dhiska dheefshiidka.
Baaristani ayaa lagu ogaaday in ay filfishu hoos u dhigeyso tirada Aasiid ay caloosha so deyneyso xiliga ay ku jirto shiidida cunnada, isla markaana ay kor u qaadeyso iney baraxdo dheecaamada tirade badan oo ay caloosha soo deyneyso.
sidoo kale waxeykhubaradani ka socotay world medical institution in filfisho ay jirka ka yareyso biyaha faraha badan taasoo ay ku jirto maadooyin sameynaya “OKSIDHEESHIN ama yareynaya xadiga biyaha ku jira jirka.
Dhanka kale waxaa ka mid ah faa’idada ay leedahay filfishu inay dhamaan jirka ka baa’biso Bakteeriyada gaar ahaan kuwa ku nool ee dhuunta iyo hab-dhiska neef mareenka sida inay daawayso hargabka iyo qabowga, filfishu waxay burburisaa unugyada baruurta waxayna caawisaa miisaan dhimista, waxay kaloo wax katartaa suuska ilkaha, ilka xanuunka iyo dhibaatooyinka araga. Sidoo waxaa jira daarasado kale oo muujinaya in filfishu hoos u dhigto khatarka cudurrada kansarka iyo beer xanuunka.
DARAASAD: Badsashada Cabitakaanka Biyuhu Waxa Ay Hoos U Dhigaan Cudurrada Wadnaha Ku Dhaca Qiimaha Caafimaad Ee Saliida Dhaga Yaraha Iyo Sida La Iskugu Daaweeyo Cunista Xabad Muus Ah Maalin Kasta Waxay Kaa Badbaadin Kartaa Xanuunada Indhaha Waxtarka Huruuda Iyo Xanuunada Ay Dawayso